Wednesday August 07, 2019 - 07:09:01 in Wararka by Super Admin
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Pakistan ayaa lagu sheegay in ay ceyrisay safiirkii Hindiya ufadhiyay magaalada Islam'abad islamarkaana ay soo ceshatay safiirkii ka fadhiyay magaalada Ne Delhi.
Wasiirka arrimaha dibadda Pakistan ninka lagu magacaabo Shaah Maxmuud Qureyshi ayaa warbaahinta u sheegay in tallaabadan ay qaadeen ay ku doonayaan sidii ay hoos ugu dhigi lahaayeen xiriirka kala dhaxeeya dowladda Hindiya kadib markii ay xaalad degdeg ah kusoo rogtay gobolka Kashmiir ayna qaadatay go'aan ah in gobolkaas si buuxda loo hoos geeyo dowladda dhexe ee Hindiya.
Sidoo kale Pakistan waxay iclaamisay in ay joojisay dhammaan xiriirkii ganacsi ee kala dhaxeeyay wadanka Hindiya, goor sii horraysay oo maalintii Arbacada aheyd ayay Pakistan ka digtay dagaal lagu hoobto oo ka dhaca mandiqadda haddii Hindiya sii waddo daan daansiga ka dhanka ah xukuumadda Islam'abad.
Wararka ka imaanaya magaalada Srinagar ee caasimadda u ah gobolka Kashmiir qeybta Hindiya gummeysato ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu dhintay tira kalane ay dhaawacmeen kadib markii ciidamada Hindiya ay rasaas ku fureen dad muslimiin ah oo dhigayay dibad baxyo ka dhan ah Bandawga ay melleteriga Hindiga gobolka kusoo rogeen.
Xiisadahan colaadeed ee ka dhax dilaacay labadan dowladood ee ku hubeysan hubka wax gummaada ee Niyugleerka ayaa yimid kadib markii laba maalin ka hor ay Hindiya iclaamisay in ay laashay qodobka 370-aad ee dastuurkeeda oo dhigayay in gobolka Kashmiir si rasmi ah loogu biiro dowladda Hindiya.
Malaayiin qof muslimiin ah oo kunool gobolka Kashmiir ayaa diidan gummeysiga ay Hindiya gelisay gobolkan waxaana la sheegayaa in dad ka badan 10 kun oo qof ay ku dhinteen dagaallada ka socda gobolka Kashmiir muddo 30 sanadood ah.